ဘာစီလိုနာ၏ ဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲတွင် စံချိန်သစ် မက်ဆီတင်နိုင်ခဲ့၊ အဝါကတ် ပြစ်ဒဏ်များအတွက် မှတ?? - Yangon Media Group
ဘာစီလိုနာတိုက်စစ်မှူး မက်ဆီသည် ဂျီရိုနာကို ၆-၁ ဖြင့်အနိုင်ရခဲ့သောပွဲတွင် ကိုယ်တိုင်ဂိုးသွင်းယူခြင်းနှင့် ဂိုးဖန်တီးမှုများပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက် စံချိန်သစ်များထပ်တင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။ မက်ဆီသည် ပထမပိုင်း မိနစ် ၃ဝ နှင့် ၃၆ မိနစ်များတွင် အသင်းအတွက်ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီး လာလီဂါတွင် ၎င်းရင်ဆိုင်ကစားဖူးသော ၃၆ သင်း မြောက်အသင်းကို ဂိုးသွင်းနိုင်သည့်စံချိန်ရခဲ့သည်။
လာလီဂါတွင် မတူညီသောအသင်း ၃၆ သင်းဘက်သို့ဂိုးသွင်းယူနိုင်သော မက်ဆီမှာ ယခင်က ဘီလ်ဘာအိုတိုက်စစ်မှူး အဒူရစ်ဇ်နှင့်တူညီသော စံချိန်ဟောင်းကို ချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မက်ဆီအနေဖြင့် ၎င်း၏က စားသမားဘဝတွင် လာလီဂါ၌ ရင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးသောအသင်းများတွင် ဂိုးမသွင်းနိုင်သည့်အသင်း သုံးသင်းသာရှိခဲ့ပြီး အဆိုပါ အသင်းများမှာ လက်ရှိတွင် ဒုတိယ၊ တတိယနှင့် စတုတ္ထတန်းလိဂ်များတွင်ကစားနေသော ကာဒစ်ဇ်၊ မာစီယာနှင့် ဇီရက်ဇ်အသင်းများဖြစ်သည်။
မက်ဆီအနေဖြင့် ဂျီရိုနာနှင့်ပွဲတွင် ကိုယ်တိုင် နှစ်ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့သည့်အပြင် အဆိုပါ ပွဲ၏ဟက်ထရစ်ရှင် ဆွာရက်ဇ်အတွက် ဦးဆောင်ဂိုးကိုလည်း ဖန်တီးပေးခဲ့ရာ ကစားသမား ဘဝတွင် ဂိုးဖန်တီးမှု ၁၄၈ ကြိမ်အထိပြုလုပ်ပေးနိုင်သည့် စံချိန်ကိုပါတင်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းမှာလာလီဂါ သမိုင်းတစ်လျှောက် ဂိုးဖန်တီးမှုအများဆုံးပြုလုပ်ထားသော ရီးရဲလ်ကစားသမားဟောင်း မီချယ်တင်ထားသော ဂိုးဖန်တီးမှု ၁၄၇ ကြိမ်ကိုလည်း ချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် ဘာစီလိုနာနည်းပြ ဗဲလ်ဗာဒီက ဂျီရိုနာနှင့်ပွဲတွင် နောက်ခံလူအဲလ်ဘာ အဝါကတ်ပြခံရခြင်းနှင့် တိုက်စစ်မှူးဆွာရက်ဇ် အဝါကတ်ပြသခံရရန်နီးစပ်ခဲ့ခြင်းမှာ တမင်လုပ် ဆောင်ခဲ့ခြင်းဟုတ်၊ မဟုတ်ဆိုခြင်းကို မှတ်ချက်ပြုလိုခြင်းမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါပွဲတွင် နောက်ခံလူအဲလ်ဘာမှာ အဝါကတ်ပြသခံရသည့်အတွက် ကြားရက်အတွင်းကစားရမည့် လက်စ်ပါးမက်စ်နှင့်ပွဲကိုလွဲချော်မည်ဖြစ် သော်လည်း နောက်တစ်ပတ်တွင်ကစားရမည့် အက်သလက်တီကိုနှင့်ပွဲတွင် ပါဝင်နိုင်မည်ဖြစ်ရာ အဲလ်ဘာနည်းတူ အဝါကတ်ပြသခံရစေရန် ဆွာရက်ဇ်က တမင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း စွပ်စွဲမှုများရှိခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် နည်းပြဗဲလ်ဗာဒီက”ပွဲထဲမှာဖြစ်ခဲ့တာတွေက ကွင်းလယ်ဒိုင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပဲဖြစ်လို့ ကျွန်တော့်ဘက်က ပြောစရာမရှိပါဘူး။ တကယ်လို့အဝါကတ်ပြစ် ဒဏ်ကြောင့်ပွဲပယ်ခံရတဲ့ ကစားသမားတွေရှိလာရင်လည်း သူ့နေရာမှာတခြားကစားသမား တစ်ယောက်ယောက်ဝင် ကစားမှာပါပဲ”ဟု ပြောကြားသွားခဲ့သည်။
ဘင်ဇီမာကို ပင်နယ်တီ ပေးကန်ခဲ့သော စီရော်နယ်ဒို ကို နာဗက်စ် ချီးကျူး
နိုင်ငံအသင်း ရွေးချယ်မှုကို နှလုံးသားအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ရန် တော်မီနေးကို နည်းပြမော်ရင်ဟို တိ?
ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်သူကို ကုန်တင်ယာဉ်က နောက်မှဝင်တိုက် ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်သူ သေဆုံး
Netflix ရဲ့ ရုပ်ရှင်မှာ ကမ္ဘာ့နပန်း အကျော်အမော် ဟုခ်ဟိုဂန်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်မယ့် မင်းသား ခရစ်ဟမ်း?
တမူး နန်းဖာလုံဈေး သွားလာသည့် ခရီးသည် များပြားလာသဖြင့် တမူးမြို့ ၌ သုံးဘီး အငှားယာဉ်ပြေးဆွ?